မန္တလေး မြို့ကြီးကို ချစ်တယ်မန္တလေးမှာ လျှောက်လည်ရတာကိုကြိုက်တယ် အစားအသောက်တော်တော်များများကိုလည်း ကြိုက်တယ် ဆိုပြီး တင်ပေး လိုက် တဲ့ ရှင်ယွန်းမြတ်…. – Shwe Naung
မန္တလေး မြို့ကြီးကို ချစ်တယ်မန္တလေးမှာ လျှောက်လည်ရတာကိုကြိုက်တယ် အစားအသောက်တော်တော်များများကိုလည်း ကြိုက်တယ် ဆိုပြီး တင်ပေး လိုက် တဲ့ ရှင်ယွန်းမြတ်….
N N | May 30, 2021 | Celebrity | No Comments
မြင်သူတို င်းငေးလော က်တဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာကို ယ် ကောက်ကြော င်းအလှကို ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ မော်ဒယ်လ်ရှ င်ယွန်းမြတ်ကို သိကြမယ် ထင်ပါ တယ်နော်။ မော်ဒယ်လ်လော ကကိုဝင်ရော က်တာ မကြာ သေးပင်မဲ့
ပရိသတ်အများ အပြားရဲ့ တစ်ခဲ နက်အားပေးမှုကို ရယူပိုင်ဆိုင် ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ယောကျာ်းေ လးပ ရိသတ်တွေရဲ့ ဝန်းရံအားေ ပးမှုအများဆုံး ရရှိထား တဲ့သူမ ကတော့ social media လောကမှာ နာမည် တစ်လုံးနဲ့ ရပ်တည် နေသူတစ်ေ ယာက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
သူမရဲ့ ဆက်ဆီ ကျပြီး အမိုက် စားပုံတွေ နဲ့ ညို့ အားပြင်းပြင်း ဆွဲဆောင်နိုင် သူလေးဖြစ် တာကြောင့် လက် ရှိဖေ့ဘွတ် စာမျ က်နှာမှာ ရေပန်းစား လူကြိုက် များကာ ပုရိသတွေ ဝန်းရံ နေကြ တာလည်းဖြ စ်ပါတယ်။
သူမရဲ့ အမို က်စားပုံ ရိပ်တွေကို လူမှုကွန် ယက်ဖေ့ ဘွတ်ပေါ်တွင် အ များဆုံး တင်လေ့ ရှိတာေ တွ့ရပါတယ်။ လတ်တလော မှာတော့ ဆွဲဆောင် မှုရှိရှိနဲ့ လှရက် လွန်းနေတဲ့ GYM က အမိုက်စား ပုံလေး တွေကို ဖော်ပြထား တာတွေ့ရပါတယ်။
ယခုအခါမှာ မန္တလေး မြို့ကြီးကို ချစ်တယ် မန္တလေးမှာ လျှောက်လည် ရတာကိုကြိုက်တယ်မန္တလေးက အစားအသောက်တော်တော်များများကိုလည်း ကြိုက်တယ်အာ့ကြောင့် မန္တလေးသူလေး လုပ်လိုက်ရင် ကောင်းမလား….အဟိီ😜 CAPTION လေးကိုတင်လာပေး ပါတယ်နော်။
မြန်မာဝတ် စုံဝတ်ပြီး ရင်သား အရမ်းဖော် တယ်လို့ဝေ ဖန်ခံ နေရတဲ့ ဓာတ်ပုံကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြခဲ့တဲ့ တာပဲဖြ စ်ပါတယ်။
photo-shin yoon myat
မျက်ဝင်းရဲ့ ကိတ်လွန်းနေတဲ့ ရွှေရင်မွှာ ပုံရိပ်လေးများ…..
နွယ်နွယ်ထွန်းရဲ့ စပယ်ရှယ် ပုံရိပ်လေးများ….
အမြန်ဆုံး ရွှေလက်တွဲ ဖို့ ဘဝရဲ့ လက်တွဲ ဖော်ကို ချပြ လိုက်တဲ့ ပရိတ်သတ် အချစ်တော် အေးမြတ်သူ…..